माथिल्लो पेट मा बेचैनी, कहिले काँही, छाती मा smack पूर्णतामा को भावना, सुनिंनु, belching, वाकवाकी, जल, बारम्बार छाडा मल, खाद्य गर्न अनिच्छा र प्रारम्भिक satiety - यी लक्षण सबै, अपच कुरा, डाक्टर "अपच को सामान्य अवधारणा कल "। एक रोग छैन, बरु एक सिंड्रोम, यो एकदम लामो समय भएको छ। नडराऊ, गरेको बुझ्न प्रयास गरौं। तपाईं कुनै पनि आफूलाई पाउन भने dyspepsia को संकेत, रोग को मूल कारण लागि खोज गर्न उपस्थित हुनुपर्छ। र तरिका, तपाईं माथि को सबै महसुस सम्म प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छैन। Suffice लक्षण जोडी।
त्यसैले, dyspepsia, के यो रोग हो र यसको कारण के हो? डाक्टर दुई समूह पहिचान छ:
1 पहिलो - अपच एक इन्जाइम कमी को कारण। यो कसरी बुझ्न? र त, पाचन संलग्न शरीर केही, साथै पेट परिणामस्वरूप, आफ्नो कार्य प्रदर्शन छ छैन र अन्य पाचन अंगहरु यो हुनु पर्छ काम, र यसरी गर्न उत्पन्न गर्न सुरु गर्न असमर्थ छौं गरिब संग सम्बन्धित हाम्रो शरीर प्रक्रियाहरू लागि धेरै सुखद छ खाना को पाचन।
के अंगहरु समग्र प्रक्रिया दबाउने गर्न सक्नुहुन्छ? यो सबै कलेजो, gallbladder, अग्न्याशय, intestines, पेट नै, र एकचोटि पनि धेरै अंगहरु बाहिर जान्छ। तदनुसार, dyspepsia gepatogennoy, holetsistogennoy, pancreatogenic, gastrogennoy, enterogenous र मिश्रित हुन सक्छ।
प्रस्ट छ, यो मामला मा, तपाईं पहिलो कारण पत्ता लगाउन र विद्रोही शरीर (वा शरीर) निर्धारण, र त्यसपछि जन्माउने समस्या उन्मूलन अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
2., प्रसंगवश, धेरै साधारण छ जो dyspepsia, दोस्रो प्रकार, यो alimentary dyspepsia छ। यो कस्तो अर्थ राख्छ? मानिस एकदम आफ्नो पोषण बारेमा आकस्मिक, र हाल धेरै कुनै न कुनै त्रुटिहरू गरे। अर्थात् अनावश्यक अत्यधिक मात्रा मा, पाचन प्रणाली को एक असंतुलन तिर जान्छ dyspepsia को घटना अर्थात् उत्पादनहरु को कुनै पनि प्रकार, मा सक्रिय दुबला। यहाँ तीन उपप्रकारों विभाजन गरिएको छ। Fermentative dyspepsia: जब धेरै चिन्तित कार्बोहाइड्रेट (सिमी, बन्दागोभी, फल, मह, मिठाई र पीठो), जो, को intestines मा धेरै प्रकुपित किण्वन मा, अप्रिय sensations माथि नाम सारा दायरा अनुभव गर्न व्यक्ति पैदा। Dyspepsia putrefactive: यहाँ culprits पाचन लागि लामो समय आवश्यकता प्रोटीन (मटन, मासु, पोर्क, र sausages र अन्य डेरिवेटिव) छन्। थप ठीक छैन प्रोटीन आफूलाई र आफ्नो असीमित प्रयोग। Adipose dyspepsia (पनि साबुन भनिन्छ: यो यस्तो पाठो र सुँगुरको रूपमा दुर्दम्य बोसो, को अत्यधिक अवशोषण मा परिणाम)।
तपाईं - तपाईं के खान
अपच प्रकृतिका पोषण हो भने, रोगी गर्न, को पाठ्यक्रम, यो एक खतरनाक उत्पादन प्रयोग रोक्न सबै आवश्यक पहिलो, साथै विभिन्न "जोखिम समूह" को सबै उत्पादनहरु छ। अझ राम्रो - तुरुन्त आहार मा आफूलाई राखे (एक स्वस्थ आहार कसरी हुन, अब सजिलो छ)। तर सबै तेल र मसला को एक सानो राशि संग एक जोडी आफ्नै भोजन तयार फैटी, मसालेदार, तला, मिठाई, पीठो, आदि निर्मूल गर्न आवश्यक र जहाँसम्म सकेसम्म कि सम्झना। एक सख्त शासन जस्तै मा शरीर पकड कम्तिमा केही दिन आवश्यक छ।
तपाईंले पहिले नै neuralgia रूपमा त्यस्तो अप्रिय रोग बारे थाहा छ। यो र कसरी यो युद्ध गर्न, शीघ्र अनुभवी डाक्टर के छ। आत्म-medicate आवश्यक छैन। आखिर, तपाईं बुझाइएको आफूलाई निदान को शुद्धता पक्का हुन सक्दैन, र यसरी अनिश्चितकालीन तपाईं गल्ती कि Christen शब्द "dyspepsia" कुनै पनि अन्य रोग को उपचार ढिलाइ गर्न नलिइ। रोकथाम, पाठ्यक्रम, यो मामला मा superfluous हुनेछ, तर यो पर्याप्त नहुन सक्छ, र नयाँ, थप जीवन्त लक्षण को माध्यम द्वारा आफ्नो शरीर गम्भीर उपचार गर्न आवश्यक पर्दछ।
Coprophagia - यो आदर्श वा तिरस्कार छ?
किशोर आत्महत्या: कारणहरू र रोकथाम
अंग्रेजी मा एक जन्मदिन कसरी मनाउन?
के तापमान मा बग मृत्यु र आफ्नो बल गर्छ?